कतिपय व्यक्तिहरुले ने.क.पा.(मसाल) ले गरेका अनुशासनसम्बन्धी विभिन्न कारवाही तथा के.पी. शर्मा ओलीले गरेका कारवाहीको प्रकृति एकै प्रकारको भएको विचार प्रकट गर्ने गरेको पाइन्छ । खास गरेर ने.क.पा.(मसाल)ले गम्भीर प्रकारका अराजकतावादी वा अनुशासनविहीन कार्यका लागि पार्टीबाट निस्कासित व्यक्तिहरुले त्यस प्रकारको विचार प्रकट गर्ने गरेका छन् । त्यसरी उनीहरूले यो मत प्रकट गर्ने गरेका छन् कि उनीहरूमाथिको कारवाही पनि ओलीको कारवाही जस्तै अन्यायपूर्ण र अधिनायकवादी छ भन्ने विचार प्रकट गरेको पाइन्छ । त्यसो गर्ने बेलामा उनीहरूले ती दुबै प्रकारका कारवाहीहरूका बीचमा भएको मौलिक अन्तरमा ध्यान दिएको पाइन्न वा जानीबुझीकन उनीहरूले वास्तविकताको तोडमोड गरेर भ्रम दिने प्रयत्न गरेका छन् ।
वास्तविकता यो हो :
हाम्रो पार्टीले अनुशासनसम्बन्धी गम्भीर गल्ती गरेका व्यक्तिहरुमाथि नै कारवाही गर्ने गरेको छ । ओलीको कार्यप्रणाली त्यो भन्दा मौलिक रुपले नै बेग्लै छ । त्यहाँ गम्भीर प्रकारको अनुशासनसम्बन्धी गल्ती गर्ने व्यक्तिहरुले अर्थात् ओली पक्षले नै कारवाही गर्ने गरेका छन् ।
ओली पक्षको मुख्य कमजोरी के हो ? त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । उनले पूर्व नेकपाको बेलामा घोषित रूपले नै आफ्नो सङ्गठनको बहुमतको निर्णय नमान्ने वा आफ्नो बहुमत नभएको कारणले आफ्नो सङ्गठनका उच्च कमिटीहरुको बैठकमा नबस्ने, सार्वजनिक रुपले नै अभिव्यक्ति दिएका थिए । हाम्रो पार्टीको स्थिति त्यो भन्दा बेग्लै छ । हामीले महाधिवेशन, केन्द्रीय वा बहुमतका निर्णयहरुको उलङ्घन गर्ने मात्र होइन, तिनीहरूका विरुद्ध सार्वजनिक रुपले अभिव्यक्ति दिने, सार्वजनिक रुपले नै अनुशासनविहीन गतिविधि गर्ने तथा पार्टीको सम्पत्तिलाई हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै पार्टीबाट निस्कासित गर्ने गरेका छौँ । त्यसरी स्पष्ट छ कि ती दुबै प्रकारका कारवाहीहरूका बीचमा मौलिक अन्तर छ ।
नेपालका सबै वामपन्थी पार्टी वा संगठनहरू मध्ये ने.क.पा.(मसाल)ले नै माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली वा जनवादी केन्द्रीयताका सिद्धान्त अनुसार पार्टीभित्र सबैभन्दा राम्ररी अनुशासन कायम राख्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टीको विधानले उच्च प्रकारको जनवादको अभ्यासका लागि स्वतन्त्रता दिन्छ । तर अन्य वुर्जुवा वा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टी वा सङ्गठनहरूमा जस्तो पार्टीभित्रका सबै मतभेद वा अन्तरविरोधहरूलाई असम्बन्धित समिति वा सार्वजनिक रुपमा लैजान मिल्दैन । अन्य पार्टीहरूले त्यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्छन् । तर हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार त्यसलाई हामीले अनुशासनविहीनता भन्दछौँ र आवश्यकताअनुसार अनुशासनको कारवाही पनि गर्दछौँ ।
जुनबेला नेकपा एउटै थियो त्यो बेला पनि उनीहरूको सङ्गठन प्रणाली वा अनुशासनको स्वरुप माक्र्सवादी–लेनिनवादी प्रकारको थिएन । त्यो बेलाको उनीहरूको सङ्गठन प्रणालीको सरसरी अध्ययनबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । उनीहरूले गुटवन्दी गर्ने, मतभेदहरूलाई सार्वजनिक रुपले लैजाने वा आन्तरिक अन्तरविरोधहरूलाई सार्वजनिक रुपले सञ्चालन गर्ने गर्दथे । त्यस प्रकारको सङ्गठन प्रणालीले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठन प्रणालीसित मेल नखाएको कुरा प्रष्ट छ । हाम्रो पार्टीको सङ्गठन प्रणाली वा अनुशासनलाई पनि नेकपाको जस्तो बनाउने प्रयत्न नभएका होइनन् र त्यस प्रकारको प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीले कडा सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । त्यो क्रममा कतिपय पार्टी सदस्यहरूलाई पार्टीबाट निस्कासित पनि गर्नुपरेको थियो । त्यस प्रकारका व्यक्तिहरूले नै अहिले उनीहरूमाथि गरिएको कारवाही ओलीले गरे जस्तो अन्याय र अधिनायकवादी भयो भनेर हल्ला गरिरहेका छन् ।
ओलीको सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक कार्यप्रणाली निश्चित रूपले नै अधिनायकवादी प्रकारको छ । जस्तो कि माथि भनियो, पहिले नेकपाको बेलामा उनले आफ्नो सङ्गठनका बहुमत वा कमिटीका निर्णयहरू नमान्ने घोषणा गर्दै सार्वजनिक रुपले नै अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्नो सङ्गठनको विधानको समेत कुनै ख्याल नगरिकन स्वेच्छाचारी प्रकारले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू थपे । उनको सत्ताको दबाबले गर्दा निर्वाचन आयोगले त्यस प्रकारको गलत कार्यबारे पनि कुनै निर्णय दिन सकेको थिएन । अहिले एमालेको पुनस्र्थापनापछि पनि उनले अन्धाधुन्ध प्रकारले कमिटी वा पदाधिकारीहरूको पुनर्गठन गर्ने वा खारेजी र वहाली गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
उनको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारीताको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूमाथि नै उनले कारवाही गरिरहेका छन् । त्यस सिलसिलामा उनले संविधानको उलङ्घन गर्ने र सर्वाेच्चको सांसदको पुनस्र्थापनाको फैसलालाई विफल पार्ने वा संसदलाई नै विघटन गर्ने दिशामा योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो पार्टीको विधान वा महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिका निर्णय अनुसार गरिएका अनुशासनका कारवाहीहरू तथा ओलीको कार्यप्रणालीका बीचमा मौलिक भिन्नता भएको कुरा स्पष्ट छ ।